Amantongomane Nama Bolts Handare China Manufacturers & Suppliers & Factory
Amantongomane Nama Bolts Handare - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Amantongomane Nama Bolts Handare)
izingxenye ze-aluminium ezazinamagquma e-shim I-Aluminium yethu yokubala i-Washer ingenziwa ngokwezifiso ukuze ichaze imininingwane yakho futhi yakhiwe ngohlu lwamamaki ezibonakalayo, ukushisa, amadiyamu kanye nobukhulu. Uma ungaboni i-washers ye-aluminium oyifunayo kukhathalogi yethu, sithumele i-RFQ ngama-specs...
I-OEM aluminium nuts m4 enamakhasethi we-flanged Amantongomane athunyelwe ahlukile kakhulu ngokuqhathaniswa namantongomane ajwayelekile. It is serared ngaphakathi okungadonsela amehlo abantu abaningi. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon...
Ama-4mm we-serated wheel nati Amantongomane okuzikhiya kwe-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeka yinhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakhahlothi...
I-Flange nati enamafutha okusontelana Amantongomane okuzikhiya kwe-Aluminium alungele izesekeli ze-drone, okwenza i-drone iyonke ibukeka yinhle kakhulu. Emantongomane sinamantongomane amaningi e-aluminium, amantongomane angensimbi, amantongomane e-hexagon nuts ne-nylon hexagon nut esitokweni. Futhi amakhahlothi...
Izinga eliphakeme le-cnc aluminium tube clamp elinama-screws Incazelo Yomkhiqizo I-12mm-30mm yangaphakathi ye-aluminium carbon fiber tube clamp clamp, ukubukeka kwe-cnc machining ukubukeka okuhle, ukwelashwa komhlaba. Izinga eliphakeme lekhwalithi ephezulu ye-aluminium multi-axis universal, isebenzisa indiza...
Amantongomane Nama Bolts Handare Amantongomane nama-Bolts Handare Amantongomane ama-Bolts no-Washer Amantongomane eNylon namaBolts Khiya Amantongomane namaBolts Amnyama Amnyama NamaBolts Hardware Amantongomane Aqinisekisiwe Nama-Bolts Sets Amantongomane amahle Threaded